"Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony hotandremana." Ohabolana 4:23
"Matokia an’i Jehovah ianao, ka manaova soa… Miantombena tsara miandry an’i Jehovah ianao ka manantenà Azy." Salamo 37:3,7
Miha antitra aho, ary miha very ny fitadidiako ; kanefa misy zavatra roa loha tsy hadinoko mihitsy, dia izao : tena mpanota aho, ary Mpamonjy tena lehibe mihitsy Jesosy. (Isaac Newton)
Tokony hianatra ny ho tsinontsinona ny mpanompo, mba ho ny Tompo irery no hankalazaina.
Ny fahatakarana ny fahasoavan’Andriamanitra dia tsy mampieboebo izay iharany, fa vao mainka aza mampanetry tena azy. Mametraka ny olona eo amin’ny toerany izany, ary manome ho an’Andriamanitra ny toerany.
Manomboka ny mandrakizay isika rehefa miditra eto amin’izao tontolo izao. Ny fotoana iainantsika eto an-tany dia ampahany fohy amin’izany, ary mihelina tahaka ny zavona, kanefa mandritra izany no ho voafaritra, ary tsy ho azo ovàna intsony, ny toerana hisy ny tsirairay, aorianan’ny fahafatesana.
Tsy ilain’Andriamanitra, na ny fanomezantsika na ny asantsika, raha mbola tsy Azy isika.
Rehefa eo an-tongotry ny Tompo ny kristiana tsirairay, vao ho afaka mifanakaiky ny samy kristiana.
Rehefa mandom-baravarana ny fakam-panahy, dia aoka isika hieritreritra an’i Jesosy : Izy no mahay manafaka antsika.